ဂျီတော့ခ်ချည်း သုံးနေမယ့်အစားလာ့ဂ်တင်ပါလား။ – Giant's Web
© 2016. Powered by WordPress. Created by Zox Zin Min	ဂျီတော့ခ်ချည်း သုံးနေမယ့်အစားလာ့ဂ်တင်ပါလား။
← ကျွန်တော်နှင့် Rainbow Hotelအန်းတားသည် ဘလော့ဂ်ဂင်း →
10 comments on “ဂျီတော့ခ်ချည်း သုံးနေမယ့်အစားလာ့ဂ်တင်ပါလား။”	ဇောင်း says:	October 19, 2009 at 3:55 pm	ဘီလို တတ်ဂ် ရေးရမလဲ 😀
flowerpoem says:	October 20, 2009 at 2:18 pm	ရေးပေးပါ့မယ် ကို Zox ဒီနေ့မှ တဂ်တစ်ခုပြီးလို့ နောက်နေ့ရေးပေးပါ့မယ်. . . တဂ်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်. .. စာရေးဖြစ်တာပေါ့. . .
နေ့အိပ်မက် says:	October 20, 2009 at 4:33 pm	အင်း… ခက်တာက မြန်မာပြည်မှာစာအုပ်မဖတ်တဲ့သူက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုများလာတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ကိုစာရေးခိုင်းရင် ကျားအမြီးဆွဲခိုင်းသလို ထွက်ပြေးကြမှာ….. ဘလော့မှာက အီလို့လည်းမရ၊ ကျူဖို့လည်းမလွယ်ဆိုတော့ မဘလော့ချင်ကြဘူးပေါ့လေ…. နောက်တစ်ခုက ရေးချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်.. နေ့အိပ်မက်ဆို သူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကို လိုက်မေးဖူးတယ်…. တော်တော်များများက ဘလော့ချင်တယ်ဆိုတာချည်းပဲ… ဒါပေမဲ့ သူတို့မလုပ်တတ်တာနဲ့၊ ကျော်ရခွရတာ နားမလည်တာနဲ့တင် စာရေးချင်တဲ့စိတ်ကပျောက်သွားတာ…… ခုmmgeniusလိုမျိုးပေါ်လာတာတော့ ဘလော့ဂါတွေအတွက် အားတက်စရာပေါ့ မြန်မာပြည်မှာ ဘလော့ဂါတွေ အခုထက်မက ပိုများလာစေချင်တာတော့ အမှန်ပဲ.. ကိုzoxရဲ့ စေတနာကိုတော့ တကယ်လေးစားတယ်… ခုဒီပို့စ်ကိုဖော်ဝပ်မေးလ်လုပ်လိုက်ပါလား.. ဘလော့ချင်တဲ့သူများ များလာလေမလားလို့…. တစ်ယောက်လည်းတစ်ယောက်ပေါ့လေ..
chitloonthu says:	October 21, 2009 at 7:43 am	လာလည်သွးတာ ကျေးဇူးပါ.. အစ်ကိုပြောသလိုပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်.. အခုခေတ်က ချက်တင်တွေပဲများနေတာ..
ဘလော့တွေက စိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်သလို.. ကိုယ်သိတာတွေကို လည်း ဗဟုသုတအဖြစ်.. သူများကို ချပြလို့ရပါတယ်.. ၀ါသနာပါသူတွေအတွက်လည်း.. စာရေးနိုင်တာပေါ့.. ရှယ်ပိုစ်လေးပါ forward မေးလုပ်နိုင်ရင် ကောင်းတာပေါ့..
မေကျော် says:	October 21, 2009 at 12:40 pm	အင်း… ချက်တင်းကိုတော့ စိတ်ပူတာ အမှန်ပဲ … ကျနော့်ညီမလေးတွေကို အင်တာနက်သင်ပေးတုန်းကလည်း ချက်နဲ့ ဘလော့ကို တူတူ သင်ပေးတာ … မဟုတ်ရင် ချက်ကို စိတ်တအားပါသွားမှာစိုးလို့ … မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် တဂ်ထားတဲ့အတွက် ကျနော်ကလည်း မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ရေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ….
yamin says:	October 21, 2009 at 2:35 pm	hello
Mg Ogga says:	October 21, 2009 at 4:08 pm	မနေအိမ်မက်ပြောသလိုပဲ ဗျ ဘလော့ရေးဖို့ အတားအစီးက များသားဗျ ဒီ တဂ်လုပ်ထားတာလေးတွေစုပြီး ဖော်ဝက်လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဗျ ကျနော်ရေးပြီးပြီနော် စိတ်ဆိုးရဘူးနော် ဟီးဟီး
ဖိုးဂျယ် says:	October 21, 2009 at 8:40 pm	ဟုတ်တယ်ဗျာ အတွေးတူတယ် ကျွန်တော်လဲ ဘလော့ လုပ်ချင်တယ်ဆို တတ်နိုင် သမျှ ကူညီပေးတယ်။
တဂ်ကို ကြိုးစား ရေးပေးပါ့မယ်း) ဘယ်လိုရေးရမလဲ မသိသေးလို့
တဂ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ
yamin says:	October 22, 2009 at 10:08 am	You can read my post your tag. I am writing to your tag. ok
You came back tag post comment me. I am waiting tag post.
You are advice me.
အချစ်မဲ့ဂစ်တာ says:	October 25, 2009 at 12:16 pm	ရေးထားတာကောင်းတယ်ဗျာ… တက်ဂ်ပို့စ်ကိုတော့ ရေးပေးပါမည်။ နောက်ကျနေရင်လည်း ခွင့်လွတ် သယ်ရင်းရေ…. အလုပ်များနေလို့… အကြွေးမှတ်ထားနော်… လာမည်.. နည်းနည်းကြာမည်ပေါ့ဗျာ..။ 😛